musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » FLYING WHALES: Yakakura Cargo Airship Munyika
MHWANDA YEMAHARA yakagadzira mhinduro, inokwanisika uye yakasununguka-inogadzirisa mhinduro kutakura inorema mizhinji mizhinji munzvimbo dzakakora kana dziri kure.
Kambani yeFranco-Quebec FLYING WHALES, iyo inogadzira, inogadzira uye inoshanda yakakura kwazvo inotakura mhepo pasi rose (iyo LCA60T), iri kugadzirira kusimudzira mabasa ayo muQuebec.
Kurongwa patsva kweShareholder Structure
Kuti usvike pamatanho anodiwa kuti uwane rezinesi rekushanda, FLYING WHALES iri kuzivisa kuti iri kugadzirisa zvakare chimiro chayo chekugovana.
Musi waSeptember 9, 2021, AVIC GENERAL, yakatengesa migove yayo yakaenzana ne24.9% yedanda muFYING WHALES, kuburikidza neAVIC GENERAL France, kune vagovani veFrance vazvino vakabatanidzwa neboka reFrance rekubhengi Oddo.
Nekuda kweizvozvo, veFrench veruzhinji uye vakazvimirira vanogovana vane 75% yeFYING WHALES uye Quebec muridzi we25% kuburikidza neInvestissement Quebec (IQ). Iyo inotsigira Montreal "Les dirigeables FLYING WHALES Québec" ndeye 50.1% yeFLYING WHALES uye 49.9% neIQ.
Québec: Imba Yekutanga muAmerica
Basa rebazi reMontreal ndere kupinda muQuebec aeronautical chikamu uye nekubatana nevatambi vechikamu vakasimbiswa uye vanovimbika kuvaka pane mamwe mabhenefiti eCAA60T. Kubatanidzwa uku kuchabatsira kukura indasitiri yezvendege yeQuebec, kunyanya maererano nemasimba anogona kudzokororwa mune ino yakakosha hupfumi cluster.
FLYING WHALES ichagadzirira saiti yemaindasitiri muQuebec yemitsara yegungano yezvikepe zvayo zveLCA60T zvendege zvekuAmerica. Nzvimbo dzinoverengeka dziri pasi pekudzidza. Iyo saiti yakasarudzwa inoburitsa ese eLCA60Ts akagadzirirwa maAmerica. Izvi zvinomiririra makumi emamiriyoni mukudyara uye, pakupedzisira, kuumbwa kwemamwe mabasa mazana maviri akananga, emhando yepamusoro uye anobhadharwa zvakanaka.